विचार | Naya Yougbodh National Daily | Page9Free songs
Home / विचार (page 9)
विकास प्रक्रियामा बेथितिका प्रबृत्तिहरु
July 9, 2019	0 99 Views
रमेशकुमार अधिकारी नेपालको विकास प्रक्रियामा विभिन्न प्रबृत्तिहरु विकास भएका छन्। यी प्रबृत्तिहरु थिति बसाउने भन्दा बेथिति फैलाउने खालका छन्। यस लेखमा केही प्रबृत्तिहरुको चर्चा गर्दै विकल्प प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। यस क्रममा पहिलो हो समस्याबाट समाधान खोज्ने प्रबृत्ति। अर्थात ...
रिसिलिङ पिचमा कांग्रेसको जय
July 9, 2019	0 74 Views
गोविन्द खड्का असार १७ गते नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ३ ले घोराहीमा विरोध जुलुस निकाल्यो। उसको व्यानरमा ‘घोराही उपमहानगरपालिकाबाट गरिएका गुणस्तरहीन कालोपत्रेबिरुद्ध विरोध ¥याली’ लेखिएको थियो। सबैले भित्र भित्रै गुनासो गरेका थिए, कांग्रेसले सार्वजनिकरुपमा अगुवाइ ग¥यो। जनताको भावना नेतृत्व गरेको ...
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाऊ
July 8, 2019	0 56 Views
डिल्लीबहादुर रावत कुनै पनि काम गर्नु भन्दा पहिले सोच्नुपर्दछ। अनि मात्र राम्रो प्रतिफल निस्कन सक्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने काम अन्ततः घातक सिद्ध हुन जान्छ। त्यसैले दिगो योजना बनाएर कामको थालनी गरे प्रतिफल पनि राम्रै निस्कन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ...
आफ्नै भकारोमा मल छैन अर्काको गोदाममा मल हुन्छ ?
July 8, 2019	0 45 Views
मधुसूदन सुवेदी हामी हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान देश भन्छौं। हकामी हाम्रो जनसमुदायलाई कर्मयोगी किसान भन्छौं। नेपालमा कृषिको कुरा गर्दा र कृषकको कुरा गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ भनिन्छ। कृषिमा रासायनिक मल तथा विषादीको बारेमा कृषकलाई सचेतना जगाउनुपर्दछ भनिन्छ। कृषिमा अग्र्यानिकमय ...
खस आर्य जातिको ऐतिहासिक झलक
July 7, 2019	0 49 Views
शशिधर भण्डारी बृहत नेपाली शब्दकोषमा खस जातिलाई ्रामायण महाभा्रतकालदेखि प्रसिद्ध तथा सातौं आठौं काल शताब्दी देखि पश्चिमी नेपालको व्रितृत पहाडी प्रदेशमा शासन गर्दै आएको वी्रता ्र सभ्यताका निमित्त प्रसिद्ध एक प्राचीन जाति खसानको बासिन्दा खस भने्र उल्लेख ग्िरएको छ। ...
July 7, 2019	0 37 Views
डा.सुमनकुमार रेग्मी हिमाली जडीबुटी यार्चागुम्बाको औषधीय गुणको महत्वका का्रण यसले प्रश्रत पैसा दिन्छ। यसबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रका मानिसले ्राम्रो आम्दानी ग्िर्रहेका छन्। शक्तिबद्र्धक जडीबुटीका रूपमा लिइने हु“दा यसको विश्व बजा्र ्राम्रो छ। अचेल हिमाली ‘भियग्रा’का रूपमा प्रचा्िरत यार्चालाई चिनिया“ले शताब्दीऔंदेखि ...
बजेट, वर्तमान कानुन र असारे विकास
July 5, 2019	0 44 Views
हरिप्रसाद पाण्डेय बजेट भन्नाले सरकारद्वारा तर्जुमा गरिएको आर्थिक दस्तावेज हो। जसमा तोकिएको आर्थिक अवधिका लागि प्रक्षेपण गरिएको राजश्व र विनियोजित खर्चको अनुमानित बिवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ। नेपालमा एकसय चारवर्षे राणा शासनकालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने परिपाटी नै थिएन। मुलुकको शासन सञ्चालनको ...
गुरुकुलदेखि प्राविधिक शिक्षासम्म
July 5, 2019	0 33 Views
जंगबहादुर चौधरी हाम्रो देश नेपाल एसियाका विशाल र शक्तिशाली दुई छिमेकी देशहरु चीन र भारतको बीचमा दुई ढुङ्गाबीचको तरुल झैं पूर्व–पश्चिममा खुडाकारमा अवस्थित छ। यो वहुभाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र बहुजातीय विविधता भएको भूपरिवेष्ठित, सार्वभौम, स्वतन्त्र मुलुक हो। गणतन्त्र नेपालको पा“च ...
सभ्यताको आँखी झ्यालबाट नेपाल हेर्दा
नारायणप्रसाद शर्मा हामी नेपालीहरुलाई संसारमा कहा“ के भइरहेको छ भन्ने विषयमा जान्ने उत्कण्ठा कति होला ? कतिलाई आफ्नै धुनी, लकडी र व्यवसायले त्यस्ता कुरा सोच्ने फुर्सदै हुन्न। शैक्षिक व्यवसायले पनि मान्छेलाई संसारको सभ्यतामा डुब्ने समय दिन्न। विद्यालयमा पढायो र घर ...
July 3, 2019	0 52 Views
नरायणप्रसाद पौडेल कार्यक्रम † काम कम, कुरा बढी, समय सक्ने उपक्रम रकम हजम, झेलको खेल खतम्। यसै अनुसार बुझ्नपर्ने अवस्था आएको छ अचेलका कार्यक्रमलाई। सफलतापूर्वक भव्य र सभ्यरुपमा कार्यक्रम सम्पन्न भए। अब काम हुन्छ। सुखी र खुशी हुन पाइन्छ। समृद्धि ...
Page9of 375« First...«7891011»203040...Last »